Etu aga - esi duzie ndị ọrụ dabere na Ọnọdụ ha na WordPress | Martech Zone
Etu aga - esi duzie ndị ọrụ dabere na Ọnọdụ ha na WordPress
Thursday, July 26, 2018 Douglas Karr
Ọfọn, ọ bụ ọtụtụ ihe siri ike karịa ka ị nwere ike iche. Lee ụfọdụ nsogbu ị na-abanye:
Adreesị IP emelitere na-aga n'ihu ndabere. Na ọdụ data GeoIP na-akwụ ụgwọ nwere nnukwu ụyọkọ data na-efu ka izi ezi nwere ike ịbụ nnukwu nsogbu.
Peeji nke dị n'ime kwesiri ka e mesoo gi. Ọ dị mfe redirect mmadụ na ibe ya, mana gịnị ma ọ bụrụ na ha abanye na peeji nke ime? Have ga-agbakwunye mgbagha kuki ka ha nwee ike ibugharị ya na nleta mbụ na nnọkọ, wee hapụ ha naanị ka ha na-enyocha saịtị ahụ.
Caching dị oke mkpa n'oge a na ịchọrọ inwe sistemu na-emeso na-achọpụta onye ọrụ ọ bụla. Chọghi otu onye obia si Florida aga Florida page and then every visitor after that.
arịrịọ maka data na onye ọrụ ọ bụla na ibe ọ bụla nwere ike ibelata ihe nkesa gị. Ikwesiri ịchekwa oge onye ọrụ ọ bụla ka ị ghara ịnọgide na-achọ ihe ọmụma ahụ ugboro ugboro.
Izu ọ bụla eji eme ihe na - eweta ọtụtụ nsogbu ka m mechara kwụsị ma mee nyocha. Obi dị m ụtọ, otu ụlọ ọrụ amatala ma lekọta nsogbu ndị a na ọrụ, GeotargetingWP. GeotargetingWP bụ ọrụ API dị ike iji geotarget ọdịnaya ma ọ bụ mepụta geo redirects redirects n'ime WordPress. Ha ewuola plugins anọ enwere ike iji dabere na mkpa gị:
Geotargeting Pro bụ ngwa mgbakwunye kachasị amasị maka ndị ahịa mmekọ maka mba ha na-enye ụfọdụ n'ihi na ọ dị mfe ma nwee ike dị ike. Ugbu a jiri oke izizi nyere gị aka ịchekwa ọdịnaya dị na steeti na obodo.
Geo Redirects na-eziga ndị ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ dị iche iche dabere na ọnọdụ ha site na iji usoro ole na ole dị mfe. Geo Redirects ngwa mgbakwunye maka WordPress ọ bụ ngwá ọrụ dị ike nke ga-eme ka ị nwee ike ịmepụta redirect dabere na ọtụtụ njirisi.
Ọkọlọtọ Geo bụ ihe mgbakwunye dị mfe maka ngwa mgbakwunye Geotargeting Pro nke ga-eme ka ị gosipụta ọkọlọtọ obodo onye ọrụ ugbu a ma ọ bụ ọkọlọtọ ọ bụla ịchọrọ site na iji koodu dị mfe dị ka nke a:
[geo-flag squared = "ụgha" size = "100px"]
Ihe mgbochi Geo ngwa mgbakwunye maka WordPress ga-enye gị ohere igbochi ohere ịnweta ndị ọrụ site na ọnọdụ ụfọdụ. You nwere ike igbochi ha ịnweta saịtị gị niile ma ọ bụ họrọ peeji nke dị mfe.
Ikpo okwu a na - enye gị ohere iwu ma jiri mpaghara wepụta ka ịghara ịmepụta iwu na - enweghị ngwụcha dabere na ọtụtụ mpaghara. Nwere ike ijikọ mba ma ọ bụ obodo iji mee ka ọ dị mfe ịchọta ndị ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịmepụta mpaghara a na-akpọ Europe na nke ọzọ a na-akpọ America, wee jiri aha ndị ahụ n'ụzọ dị mkpirisi ma ọ bụ wijetị na-azọpụta gị oge. Ichekwa abughi nsogbu, ma obu. Ha na-achọpụta ezigbo onye ọrụ IP n'agbanyeghị na ị na-eji Cloudflare, Sucuri, Akamai, Ezoic, Reblaze, Varnish, wdg. Ọ bụrụ na ị nwere omenala ọ nwere ike ịgbakwunye ya ngwa ngwa.
API ha na-enye usoro nhazi ala kachasị elu, kọntinent na-alọghachi, obodo, steeti na obodo. Ebe ọ bụ na ọnụahịa ahụ dabere na ojiji, ị nwere ike jikọọ ozugbo na API ha ma jiri ya dịka ịchọrọ.
Bido na Geotargeting WordPress
Ngosipụta: Anyị na-eji njikọ njikọ anyị na post a ebe ọ bụ na ọrụ ahụ masịrị anyị nke ukwuu!
Tags: ngọngọ ọnọdụobodombangọngọ geogeo ngwa mgbakwunyeredirect obodogeographygeotargetredirect ebealalekwasị anya ọdịnaya alawordpress plugin
Njikwa Mgbasa Ozi LinkedIn Na-ewepụta Ahụmahụ Mgbasa Ozi Ọhụrụ Ọhụrụ